फूटबल – Nepali International Categories – Khel Dainik - Page 337
बायर्न म्युनिख लगातार पाँचौ पटक जर्मन लिग च्याम्पियन
वैशाख १७ – बायर्न म्युनिख लगातार पाँचौ पटक जर्मन लिग च्याम्पियन बनेको छ । लिग अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा वुल्फबर्गलाई ६–० ले हराउँदै उपाधि पक्का गरेको हो । बायर्नले लिगका तीन खेल बाँकी छँदा नै उपाधिमाथि कब्जा जमाउन सफल भएको हो । योसँगै प्रशिक्षक कार्लो एन्चेलोटीले युरोपका चार भिन्न लिगमा उपाधि जित्न सफल भएका छन् […]
रियलको जित, बार्सिलोनामाथि दबाब
वैशाख १६ – रियल म्याड्रिड जितपछि ला लिगाको उपाधि होडमा बार्सिलोनामाथि दबाब कायम राखेको छ ।
मेस्सी जस्तै भेटिए ईरानमा
बैशाख १६ / जसले फुटबल हेर्छन्, बुझ्छन् उसले अर्जेन्टिनी स्टार लिओनल मेस्सी चिन्छन् । बार्सिलोनाका यी स्ट्राइकर लिओनल मेसी जस्तै यो दुनियाँमा कोहि होला ?
समर्थकले समलिङ्गी जिस्काउँदा परे फेला, फिफाको कारवाहीमा ब्राजिल, अर्जेन्टिना र मेक्सिको
वैशाख १५ – विश्वकप २०१८ को छनौट चरणका खेलमा समर्थकले समलिङ्गीको भावनामा ठेस पुग्ने गरी हुटिङ गरेपछि टीमले नै सजाय भोग्नुपरेको छ ।
इपिएल: म्यानचेस्टर सिटी र युनाइटेड गोलरहित बराबरीमा
वैशाख १५ । इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको म्यान्चेस्टर डर्बी बराबरीमा टुंगिएको छ । गएराति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी र म्यान्चेस्टर युनाईटेडले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन् । म्यान्चेस्टर सिटीको मैदानमा भएको खेलमा दुबै टोलीले गोल गर्ने केही राम्रा अवसर खेर फालेका थिए । खेलको ८४ औं मिनेटमा म्यान्चेस्टर युनाईटेडका मराउने फेलीयानीले रातो कार्ड खाएपछि […]
द सन लेख्छ: ‘नेइमार भित्राउन म्यानचेस्टर युनाइटेड तयार’
वैशाख १५ – बेलायती पत्रिका द सनले इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी नेइमारलाई क्लब भित्र्याउन तयार रहेको जनाएको छ । तर बार्सिलोना नेइमारलाई गुमाउन चाहँदैन । त्यसैले नेइमार युनाइटेडमा अनुबन्ध हुनेमा शंका भने छ । नेइमारले आफ्ना नजिकका साथीसँग म्यानचेस्टर युनाइटेड आउँदो समरमा विन्डोमा आफूलाई क्लब भित्र्याउन कीर्तिमानी मूल्य तिर्न तयार रहेको बताएको द सनले […]
जर्मनी कप: उपाधिका लागि डर्टमुन्ड र फ्रयाङ्कफर्ट खेल्ने, वायर्न म्युनिख पराजित
बैशाख १४ / वायर्न म्युनिखलाई ३–२ गोलले पराजित गर्दै बोरुसिया डर्टमुन्ड जर्मनी कपको फाइनल प्रवेश गरेको छ। डर्टमुन्डले अब फाइनलमा फ्रयाङ्कफर्टविरुद्ध खेल्नेछ। फाइनल २७ मेमा हुनेछ। बोरुसिया लगातार चौथो पल्ट फाइनल प्रवेश गरेको हो। ऊ दुई पल्ट म्युनिखसँग पराजित भएको थियो। २०१२ मा उपाधि जितेयता बोरुसियाले अहिलेसम्म महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जितेको छैन। ओसामाने डेम्बेलेको निर्णायक गोलका कारण बोरुसिया […]
बार्सिलोना पनी के कम ? ओसासुनालाई ७ गोल ठोक्यो !
स्पेनिश लिगा अन्तर्गत हिजो राती सम्पन्न खेलमा बार्सिलोनाले ओसासुनालाई ७-१ले पराजित गरेको छ।
रोनाल्डो नभएर के भयो र? रियल मड्रिडले ला कोरुनालाई ६ गोल ठोक्यो !
स्पेनिश लिगा अन्तर्गत हिजो राती सम्पन्न खेलमा रियल मड्रिडले डिपोर्तिभो ला कोरुनालाई ६-२ले पराजित गरेको छ।
रोनाल्डो आज नखेल्ने, कप्तान सर्जियो रामोस निलम्बन
बैशाख १३ / ला लिगाअन्तर्गत आज राति म्याड्रिड डेपोर्टिभो ला कोरुनाविरुद्ध खेल्दैछ। रियल म्याड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई आज रातीको खेलमा देख्न पाईने छैन ।
गुरुले बनाइ दिए चेलाको घर बैशाख १३, २०७४
तामाङको नेतृत्वमा फुलकन्ट्याक्ट संघ गठन बैशाख १३, २०७४
कोरोना विरुद्ध लड्न सरकारलाई सहयोग गर्न एन्फा तयार बैशाख १३, २०७४
राखेप कै तत्परतामा पोखरामा बन्ने भो अर्को वैकल्पिक रंगशाला बैशाख १३, २०७४
फुटबल संघको साधारणसभा र गोल्डकप स्थगित बैशाख १३, २०७४
भैरवलाई लियो बिक्रम स्मृति कपको उपाधि बैशाख १३, २०७४